Farmaajo oo lagu yiri: Baqdin iskulama joogno, waxaan iskula joognaa Sharci | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo lagu yiri: Baqdin iskulama joogno, waxaan iskula joognaa Sharci
Guddoomiyaha Midowga Musharrixiinta Soomaaliya ahna Madaxweynihi hore ee dalka Sheekh Shariif oo Shir Jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladdii ugu dambeysay ee dalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sheekh Shariif, oo hogaaminaya Midowga Musharixiinta ayaa Maanta si kulul uga hadlay xadgudunkii shalay Askar dharcad ah oo NISA katirsan kula kacay dad banaanbax ka dhan ah dowladda Farmaajo ka dhigayay Muqdisho.
Wuxuu ku baaqey Sheekh Shariif in cadaaladda la horkeeno Askariga, islamarkaana xabsiga laga sii daayay dadka sida sharci darrada ah dowladda u xirtay maalmihii lasoo dhaafay oo Muqdisho ka dhacayeen kacdoon shacab iyo banaanbaxyo lagu diidan yahay Farmaajo.
"Baqdin iskulama joogno, waxaan iskula joognaa Sharci," ayuu yiri Sheekh Shariif, isagoo intaasi ku daray in Musharixiinta aamusnaantooda ahayd daciifnimo, balse ay ilaalinayaan sharciga iyo dowladnimada dalka, oo Farmaajo ku tumanayo.
Waxay ku baaqeen Musharixiinta in la qabto doorasho nabdoon, oo xor iyo xalaal ah, islamarkaana ay dowladda joojiso caburinta shacabka fekerkooda dhiibanaya, ee hubka loo adeegsanayo.